EMUI dia efa manana mpampiasa mavitrika maherin'ny 470 tapitrisa isan'andro | Androidsis
EMUI dia manana mpampiasa mavitrika maherin'ny 470 tapitrisa isan'andro
Huawei dia teo am-pivezivezy tato ho ato, fiakarana haingana ho lasa orinasa finday avo lenta faharoa manerantany ary mivarotra finday an-tapitrisany an-tapitrisany erak'izao tontolo izao tato anatin'ny taona vitsivitsy, izay, miaraka amin'ny ankamaroan'ny finday Honor, dia mihazakazaka EMUI, ilay namboarin'ny orinasa sosona.
EMUI, mandritra izany, koa dia nitombo haingana. Manana mpampiasa mavitrika 500 tapitrisa isan'andro izy izao!
Tamin'ny hetsika haino aman-jery omaly, nanambara izany ny filohan'ny Huawei Consumer BG Software, Dr. Wang Chenglu EMUI dia nihoatra ny 470 tapitrisa isan'andro mpampiasa mavitrika. Hatramin'izao, ny rafitra fiasa miorina amin'ny Android dia misy amin'ny fiteny 77 sy faritra 216.
Taorian'ny nanomezany tarehimarika sasantsasany tamin'ny sosona fanavitran'ny mpanamboatra azy dia nanamafy hatrany ny fanoloran-tenan'i Huawei hanatsara azy io ny Dr. Wang. Notanisainy ny sasany amin'ireo fanatsarana lehibe tamin'ny fanontana farany an'ny EMUI, toy ny teknolojia GPU Turbo ao amin'ny EMUI 8.2, Link Turbo miaraka amin'ny EMUI 9.0, ary na dia ny Huawei Arca Compiler vaovao ao amin'ny fanavaozana EMUI 9.1 aza. Nandritra ny famelabelarana dia nanambara ihany koa izy ny fivoaran'ny rafitra fiasa tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Miaraka amin'ny fandefasan'ny Huawei finday finday maherin'ny 59 tapitrisa amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity, ny orinasa dia kasaina hamotika ny tanjona kendrena fandefasana 250 tapitrisa mandritra ny taona. Rehefa miha-mitombo ny finday avo lenta an'ny Huawei sy Honor tonga eo amin'ny tsena, EMUI dia andrasana hitombo haingana kokoa amin'ny taona ho avy.
Tsy ho ela dia hanatanteraka asa sy fanatsarana bebe kokoa ny sosona, nanomboka tamin'izay Huawei dia te hampitombo ny isan'ny mpampiasa eto amin'izao tontolo izao, ary noho izany dia ilaina ny fanavaozana ao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » EMUI dia manana mpampiasa mavitrika maherin'ny 470 tapitrisa isan'andro
Ataovy mananika ny tampon'ny Flip Flop ilay osy
Google dia handefa kinova Android Oreo ho an'ny telefaona tsotra